Qatar: Vondrom-Piarahamonina An-tserasera Tonga Hanampy ny Mpiasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2018 13:14 GMT
(Lahatsoratra nivoaka folo taona lasa izay: Avrily 2008)
Nirehitra ny tobin'ny mpiasa tao Doha, Qatar tamin'ny fiandohan'ny herinandro ary nandrava ny fananan'ny mpiasa eo amin'ny 600 eo ho eo. Matetika ny tobin'ny mpiasa dia toeram-patorian'ny mpiasa mampiatrano mpiasa mpifindramonina mandray vola $220 isam-bolana eo ho eo, misara-toerana ny vavy sy ny lahy. Namoaka ny tantara tamin'ny antsipirian'ny fiantraikan'ny afo nandrava tanteraka ny fananan'ny mpiasa ny Gulf Times. Tao anatin'ny ora vitsy monja nitaterana ny tantara, dia nivoaka tao amin'ny vondrom-piarahamonina antserasera Qatar Living navoakan'i Speed tamin'ny lohateny “Antso ho fanolorana fanomezana ho an'ireo Mpiasa tsy manana na inona na inona!” izay nanaovany antso ho an'ny mpikamban'ny habaka:
Mahatsiaro malahelo ireo mpiasa tany ireo aho ary te-hanampy azy ireo araka izay azoko atao. Fiangaviana manetry tena ho an'ny Qatari rehetra: raha mba misy afa-mitsidika ny toerana ary manome izay rehetra azonao atao, bodofotsy/ondana/lambam-pandriana/kidoro/akanjo/kiraro vaovao na efa niasa, voamaina na vary sns… Tena mila fanomezana ry zareo; very daholo ny fananan-dry zareo rehetra ary mino tanteraka aho fa tsy hanome azy ireo izay rehetra very ankoatra ny Riyal Qatari vitsivitsy ny mpanohana azy ireo… tamin'ny farany tamin-javatra hafa dia QR. 100 isaky ny mpiasa ihany no noneran'ny mpanohana!! Mihevitra ve ianao fa hanampy azy ireo amin'izay fahaverezan-javatra izao izany vola izany???
Nahazo valiny mihoatra ny 200 tao anatin'ny roa andro ny fangatahany. Izany no ohatra matanjaka amin'ny fomba fifandaminan'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera iray tonga hanampy vondrom-piarahamonina tsy tafiditra aterineto sady voahilikilika amin'ny ankapobeny. Tamin'ny alalan'ny fifanankalozan-kevitra ifanaovan'ny mpikambana ao amin'ny Qatar Living no nanangonan-dry zareo fanomezana sy vola izay hotsinjarain-dry zareo amin'ny mpiasa tratran'ny fahamaizana ny fananany.
Namoaka lahatsoratra iray hafa amin'ny valiny be dia be avy amin'ny vondrom-piarahamonina noho ny fahamaizana ny Gulf Time, gazetim-pirenena nitatitra voalohany ny tantaram-pahamaizana:
Rehefa nasongadin'ny Gulf Times ny manjò ireo mpiasa miisa 600, niteraka valiny haingana sy tsapa hatrany am-po avy amin'ny mponinan'ny Doha tamin'ny alalan'ny vondrom-piarahamonin'ny tranonkala iray anisan'ny voalohany tamin'ny fikarakarana sy fandaminana fanomezana fanampiana
Tamin'ny famoahana fiangaviana tao amin'ny Qatar Living, nandrisika ny mpikambana hafa hanangona bodofotsy, lambam-pandriana, kidoro, akanjo, kiraro ary karazan-tsakafo ny samaritana manonona ny anarany ho ‘Speed’.
Mbola mandeha ny fifandaminana fanampiana. Ny mpisera Scarlett, SPEED ary PWB izao nikarakara toeram-panangonana vitsivitsy tao Doha ahafahan'ny olona mametraka fanampiana. Hisy mpikambana vitsivitsy avy amin'ny vondrom-piarahamonina avy eo hitondra ny fanampiana ho any amin'ireo mpiasa tra-boina.